CIN Khabar कौसी खेती प्रविधि सिकाउने ‘कृषि काका’
कौसी खेती प्रविधि सिकाउने ‘कृषि काका’ भान्सामा तरकारी किन्न परेन, खेतीमा लाग्दा शारीरिक व्यायाम गर्न परेन (अडियोसहित)
विनोद शर्मा मंगलबार, वैशाख १४, २०७८, १०:४५:००
काठमाडौँ । गाउँमा घर वरिपरि करेसाबारी हुन्छ तर सहरी क्षेत्रमा खेतीयोग्य खाली जमिन पाउनै मुस्किल छ ।
पशुपालन र तरकारी खेतीको लागि गाउँ र ठूलो क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने प्रायः धेरैको मान्यता भए पनि तरिका जानेमा घरको छत र कौसीमा नै तरकारी खेती र पशुपन्छी पालन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का रामजीप्रसाद ढकाल आफ्नै घरको कौसीलाई नै करेसाबारी बनाएर भान्साका लागि दैनिक चाहिने तरकारी उत्पादन गर्दै र अरुलाई सिकाउँदै आउनु भएको छ ।
ढकालको ढलान घरको कौसीमा सानो टनेल र प्लास्टिकका थैला (ग्रोब्याग) मा तरकारी लगाइएको छ । कौसीको एउटा कुनामा रहेको खोरमा बट्टाइ हुर्किरहेका छन् ।
बिहान उठ्नेबित्तिकै कौसीमा उक्लनुहुन्छ र तरकारी, फलफूल अनि बट्टाइको निरीक्षण गरेर आवश्यक काम गर्नुहुन्छ ।
‘१२ बोट टमाटर लगाउँदा ३/४ महिनालाई टमाटर किन्न परेन । १२ बोट काउली (ब्रोकाउली) लगाएँ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बेमौसमामा गाजर उत्पादन गरे खाएँ, धनियाँ उत्पादन गरेर खाएँ । हरियो प्याज मैँले बाह्रै महिना खाएँ यहाँबाट । हरियो लसुन खाइरहेको छु ।’
मधुमेह अर्थात सुगरको समस्या भएका ढकाललाई कौसीमा लगाएको तरकारी र हुर्किइरहेका बट्टाईको स्याहार गर्दा मर्निङ वाक जानुपरेको छैन । कौसीमा फलेका तरकारी फलफूल खाएपछि अन्य रोगले पनि नछोएको उहाँको भनाइ छ ।
‘तरकारी फलफूलमा २/४ बाल्टी पानी उचालेर हालिदियो, गोलमेड गर्यो । शरीरलाई कसरत पनि भएको छ । विषादी भान्छामा ल्याउनु परेको पनि छैन ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तरकारी किन्न बजारमा जाने पैसा खर्च गर्नुपरेको छैन । आँखिरीमा खेर जाने ठाउँको सदुपयोग गरेर धेरै फाइदा लिन सकिने अनुभव भएको छ ।’
कृषि प्राविधिकसमेत रहनुभएका ढकाल अहिले ‘कृषि काका’को नामबाट चर्चित हुनुहुन्छ । उहाँ कौसीखेती गर्नुमात्रै हुँदैन, यसको तरिका पनि सिकाउनुहुन्छ । एक वर्षमा उहाँले विद्यालयसहित झण्डै ७० घरमा कौसीखेती प्रविधि सिकाइसक्नु भएको छ ।
२६ फिट लम्बाइ र १६ फिट चौडाइ क्षेत्रफल भएको आफ्नै घरको कौसीमा ढकालले हरिया सागपात, गोलभेँडा, गाजर, खुर्सानी, काउली, काँक्रो लगायतका तरकारी लगाउनु भएको छ ।
२५ हजार रुपैयाँको लागतमा सुरु भएको कौसी खेतीबाट एक वर्षमा कम्तिमा ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी किन्ने पैसा जोगिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
‘एक छाकलाई डेढ सय रुपैयाँको तरकारी लाग्छ । टमाटर, धनियाँ, काउली वा ब्रोकाउली मध्ये एउटा, प्याज, लसुन भयो हरियोसमेत ।
अफसिजनमा त सबैकुरा महङ्गो हुन्छ ।’ ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘कौसीमा टनेलमा खेती गरेर अफसिजनमा समेत खान सक्ने भएकोले महिनाको कम्तिमा ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्छ । मैले सँगसँगै बट्टाइ पनि पालेको हुँदा मल किन्न परेको छैन ।’
कौसी खेती राम्रो भएपछि गएको असोजबाट उहाँले बट्टाइ पनि पाल्न सुरु गर्नुभयो । सुरुमा उहाँसँग एक सय ५० वटा मात्रै बट्टाई थिए । तर अहिले ५ सय वटा अण्डा दिने उमेरका बट्टाई छन् । बट्टाइबाट दैनिक औसतमा ३ सय ८० वटा अण्डा उत्पादन भैरहेको छ ।
झण्डै एक लाख रुपैयाँको लगानीबाट सुरु भएको बट्टाई पालनबाट ६ महिनाको अवधिमा झण्डै ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको छ ।
‘म अण्डा मात्रै बेच्ने भएकोले मसँग भाले केही मात्रै बाँकी छन् । मैले ४ सय ५० वटा भाले बेचिदिइसकेँ । खोरमा भएका ५ सय जति पोथीहरूले दैनिक ३ सय ८० देखि ३ सय ९० वटासम्म अण्डा दिन्छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजार भाउ अहिले कम छ । एउटा अण्डाको ६ रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ । खानेलाई पनि सस्तो भएको छ र हामी उत्पादन गर्नेलाई पनि धेरै ठूलो लगानी नभएकोले खासै घाटा छैन ।’
सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि कौसी खेती प्रवद्र्धनको विषय समावेश गर्न थालेका छन् । सबै ढलान घरलाई पानी नछिर्ने अर्थात वाटरप्रुफिङ बनाएर कौसीमा तरकारी खेती गर्न सकिन्छ ।
पैसाको बचत र भान्सामा विषादी कम गराउनका लागि पनि कौसी खेती गर्नु पर्ने उहाँको अनुभव छ । ‘बजारमा आएको तरकारीमा ८२ प्रतिशतसम्म रासायनिक विषादी भएको पाइएको छ । अहिले धेरै मान्छेहरुलाई मुटु, मस्तिष्क, घाँटीको क्यान्सर लगायतका समस्याहरू बढेको पाइएको छ ।’
ढकाल थप्नुहुन्छ, ‘यी रोगहरु कम गर्नको लागि र हरेक मान्छेको घरमा भान्छामा विषादी घटाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अभियान एग्रो नामको कम्पनी बनाएर यो काम सुरु गरेका छौँ ।’
आफूले तरकारी र फलफूलको स्याहारमा बढी समय दिने र बट्टाइको स्याहार श्रीमती लक्ष्मीले गर्दै आउनुभएको ढकाल बताउनुहुन्छ ।
५ फुट चौडाइ र ६ फुट लम्बाई भएको मिनिटनेल (फलामको टेन्ट फ्रेम, सिल्पलिन, थोपा सिंचाइ सेट, कोकोपिट अर्थात नरिवलको जटाको धुलो, माटो र कम्पोष्ट मलको सोइल बेड तथा तरकारीका बीउ वा बेर्ना, हजारी लगायतको प्याकेज) निर्माणका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । एक पटक निर्माण गरेको मिनिटनेल कम्तिमा ८ वर्षसम्म खप्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १४, २०७८, १०:४५:००
शर्मा सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
६४ जिल्लामा अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप
विषादी र खर्च घटाउन कौसी खेती प्रभावकारी
अण्डा,मासु र माछामा आत्मनिर्भर,चुनौतीका चाङ
कृषिको अनुदानमा हुनेखानेको रजाइँ
एक सय १३ मेट्रिक टन आलु निर्यात
नेपाल प्याजमा आत्मनिर्भर कहिले ?
विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन मनलाग्दी
थन्किएको रेल कहिले कुद्ने ?
विद्यार्थी र शिक्षकमा शैक्षिकसत्र बारे अन्योल
कर्णाली सहितका देशभरका नारीहरुको भोगाइ र अनुभव किताबमा